SAWIRRO+Daawo: Madaxwayne Farmaajo Casho-sharaf u sameeyay Wafdiga Jabuuti iyo Fanaaniin Wacdaro ka dhigay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
SAWIRRO+Daawo: Madaxwayne Farmaajo Casho-sharaf u sameeyay Wafdiga Jabuuti iyo Fanaaniin Wacdaro ka dhigay
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo caawa casho sharaf lagu maamuusayo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo wafdigiisa ugu sameeyay Villa Soomaaliya.
Munaasibadda ayaa waxaa kasoo qayb galay Raysal wasaare Xasan Cali Khayre, Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Goleyaasha kala duwan ee Xukuumadda Soomaaliya.
Waxaa madasha lagu soo bandhigay Suugaan kala duwan oo ka hadlaysa Wadaniyadda, Xidhiidhka wanaagsan ee Labada dal iyo Kuwa kale oo Jacayl ah.
Cawaalle Aadan, Axmed Cali Cigaal, Xasan aadan Samatar, Salaad DERBI, Kooxda hobolada Qaranka, iyo Fanaaniinta Muqdisho ayaa Heeso kala duwan ka Qaaday Munaasibadda.
Baashaala, oo tuna, oo tusa, hooyadood wasooyinka argagixisada alshabaab in dadka hadii eey rabaan eey is wassi karaan. Waxeey rabaan sameeyn karraan.
Dadka muslinka iyo Ilaahooda halaga dhex baxo. Daanyeer cawaan ah, waaye, dadka argagixisda alshabaab ee iska dhigaya in iyaga loo soo dirray dadka. Xataa kuwa culumada Somalida sheegta ayaa badow ah, oo aanan fahamsaneeyn qofka iyo Ilaahiisa wax u dhaxeeya majirto.
Wadamada Islaamka waxa wasay, oo laharay waa daanyeero gaalo ah, khawaarij ah, oo dad cawaan ah, oo aanan fursad eey ku bartaan diin islaam, amaba cilmi maadi ah helin iska harawsanaya. Waxa eey wadamada Islaamka sheegta oo dhan dib ugu dhaceen waa qalooc kujirra fahammka, fasiraada, iyo barashada diinta Islaamka.
Sidee beey ku dhacday masaajida kuyaala Yurub iyo Ameria in eey nabad ahaadaan, oo masaajida kuyaala Somaliya eeysan nabad aheeyn? Oo dadka lagu hordila, amaba marka eey kasoo baxaan lagu dilla, oo uu dilaya, daanyeer kale oo eeysan Somalida fahamsaneeyn in uu gaal yahay qofkaas dilaya qof salaad kasoo baxay.
Fulaya hooyadood wasooyin ah waaye waxa Xamar kunoo, waana sababta eey ula noolyahiin, oo eey darris u yahiin 2019 20 kun oo gaao Afrikaan ah oo ilaalinaya.
Cismaaciil Cumar Geele waan taageersanahay. Dadka ha tuntaan, waxii eey rabaan hasameeyaan. Iyaga iyo Ilaahooda ayeey u dhaxeeysaa.
Laakiin, madaxweeyne Farmaajo hakusoo laabto Buffalo, New York, sababtoo ah, waaba nin caqli xun oo daanyeer ah.
Cadaado adeer, noosheeg adoo balballaarina wuxuu Farmaajo galab saday HANA isku qaldin hawsha Farmaajo & tan Khayre. WBT
Ahmed Somali, madaxweyne Farmaajo waxuu galbsaday waa beenlow munaafaq ah. Gabre iyo Ethopia ayaan kasoo horjeedaa ayuu ku qalday dad caqli daanyeer ah oo dantooda aqoon, waana kaas tagay Ethopia in kabadan madaxdii ka horeeysay issaga. Aniga waxaan ahay dadka aaminsan in Ethopiya cadow aheeyn, laakiin, dad wax magarato ah, ayuu beentas anti ethopiya in uu yahay ka dhaadhiciyay. Waxuu kaloo dhahay diyaaraddo maraacayo, oo safaro magalaya, waa been kale. Waxuu dhahay ciidan ayaan dhisayaa, oo amniga ayaan wax ka qabanayaa, waa been kale.
Meeshaan kuma soo tixi karro inta been uu sheegay daanyeer madaxweeyne Farmaajo.